निर्मला प्रकरण : डीएनए परीक्षण किन फरक–फरक ठाउँमा ? « News24 : Premium News Channel
निर्मला प्रकरण : डीएनए परीक्षण किन फरक–फरक ठाउँमा ?
काठमाडौं, १५ असोज । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तसँग सम्बन्धित डीएनए परीक्षण फरक–फरक ठाउँमा गरेको भेटिएको छ । निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को डीएनए परीक्षण प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा गराउँदा शंकास्पदको भने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गराइएको हो । एउटै घटनासँग सम्बन्धित दुई पक्षको डीएनए परीक्षण किन फरक ठाउँमा गरियो ?
नेपाल प्रहरीको प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बाहेक अरु ठाउँमा डीएनए परीक्षण हुँदैन । जसअनुसार निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को डीएनए परीक्षण प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा गरायो । प्रमाण नै नष्ट गरेको अभियोग लागेको प्रहरीले निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को डीएन परीक्षण पनि किन आफ्नै प्रयोगशालामा गरायो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । जवकी ‘स्वतन्त्र’ मानिएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि त्यो सुविधा थियो ।
के हो ‘भेजिनल स्वाब’ ?
‘भेजिनल स्वाब’ भनेको महिलाको योनीमा (भेजिना) हुने तरल पदार्थ हो । बलात्कृतको भेजाइनाबाट निकालिने तरल पदार्थलाई ‘भेजाइनल स्वाब’ भनिन्छ । बलात्कारको घटनामा भेजाइनल स्वाब संकलन गर्दा पुरुषको शुक्रकिटसमेत त्यहाँ हुन्छ । भेजाइनल स्वाब प्रयोगशालामा लगेर टेस्ट गर्दा भेजाइनल स्वाबले पुरुषको बारेमा संकेत दिन्छ ।
प्रहरीले निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को डीएनए आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा एसपी डिल्लीसिंह विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको रगतको डीएनए परीक्षण भने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गराइयो । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले घटनासँग सम्बन्धित दुबै पक्षको डीएनए परीक्षण आफू कहाँ गरिएको भए मिले/नमिलेको स्पष्ट पार्न सकिन्थ्यो भनिरहेका बेला प्रहरी भने अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ ।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाले विष्ट बाबु छोरा र किरणको डीएनए परीक्षण रिपोर्ट दिए लगत्तै शुक्रवार कञ्चनपुर प्रहरीले निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को परीक्षणसँग मेल नखाएको जनाएको थियो । यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त दावी गरेको दिलिपसिंह विष्टसँग पनि डीएनए मिलेको थिएन । निर्मला हत्याको सुरुवातदेखि नै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रमुख प्रमाणका रुपमा रहेको निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’को परीक्षण प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा मात्रै गर्नुले घटना थप रहस्यमय बनाइएको छ ।